Qaabka Ugu Sahlan Ee Aad Lacag u Shaqaysan kartid Xalaal ah Oo Online Ah; | WAJAALE NEWS
Qaabka Ugu Sahlan Ee Aad Lacag u Shaqaysan kartid Xalaal ah Oo Online Ah;
February 8, 2018 - Written by Editor:
Si aad u awooddo inaad gurigaaga ama halka aad rabto ee kale adigoo jooga aad lacag shaqaysato, ugu horrayn waa inaad haysataa aalad kuu saamixi karta inaad waddadan marto, sida Computer ama Mobile nooca android-ka ah (telku wuxuu ahaan karaa nooca aad u taqaanno screen touch).
Ugu horrayn ku dhufo link-gan https://goo.gl/BN98Kh
Kaddib dhanka bidix halka sare ee loogu talo galay in qofka userka leh uu ka galo, waxaa ku hoos yaalla regiser.
Ku dhufo register, oo kaddibna buux buuxi foomka kuu soo baxaya, isla marka aad foomkaas hawshiisa dhammayso, waxaa kuu soo baxaya inaad samaysatay, kaddib ku dhufo START WATCHING PAYED ADS oo isla markaaba kuu soo baxaysa, waana halka aad tallaabada koobaad ee shaqada aad ka bilaabaysid.
Waxaad arki doontaa khaanad ay ku kor qoranyihiin afar number tusaale ahaan 4856, fadlan geli khaanadda bannaan afarta tiro ee lagu siiyay, isla markaana eeg dhinaca bidix ee ay kuugu qoran tahay EARNED(lacagta aad shaqaynaysid).
Khaanaddan afarta tiro la gelinayo, ma dhammaanayaan waana halka aad ka shaqayn doontid, waxaa hoosteeda ku yaalla alaab iib ah oo kala duwan oo hadba marka aad afar tiro khaanadda gelisaba, kuwo kale ayaa isa soo dhigaya oo kuwii hore beddelaya, si lamid ah sida ay lacagtu kuugu kordhayso.
Ogow mar kale shaqadu ma aha mid xaddidan, waxana aad awooddaa inaad maalin gudaheed ku samaysato xaddi lacageed oo badan, waxay ku xidhan tahay hadba inta aad adigu waqti ku bixiso.
Si aad u hesho referrals waa in marka hore aad la wadaagtaa dadka aad rabto inay fursaddan ka faa’idaystaan links-ka lagu siiyay, kaasoo aad ka heli kartid marka aad ku dhufato Menu bar-ka sare halka ay ku qorantahay USER AREA, markaas kaddibna waxaad arki doontaa Link-ga aad dadka kugu xidhiidhsami doona aad siin doontid.
Talo, waxaan kugula talin lahaa in dadka referrals-ka aad ka dhigayso ay noqdaan Soomaali, oo fadlan ha ka gadan dadka kale ee qalaad adigoo dadyow Soomaali ah uga faa’idayn kara.
Marka aad u baahato inaad lacag la baxdo, dooro dhanka bidix halka ay ku taallo WITHDRAW MONEY ee farta cas ku qoran. Halkaa kaddib waxaad arki doontaa sida iyo habka ugu dhow ee aad lacagta kula wareegi kartid. Laakiin shuruuddu waa inay jiraan marka koobaad illaa 40 referrals ama tixraacayaal adiga kaa heley link oo kaddibna halkaa ka soo galay. Mar kale fadlan referrals-ka ha ka dhex gadan online-ka ee ugu danee Soomaalida adigoo ka duulaya shaqo la’aanta dad badan haysata.
Haddii ay jiraan wax kale oo aad fahmi weydo, ha ka laba-labayn inaad su’aalahaaga isoo weydiisid.